विचार - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » विचार
मई दिवस, ऐतिहासिक पाटो र वर्तमान सन्दर्भ
अजय कुमार झा मई दिवस, प्रत्येक रोमन वर्षको मई १ तारिखका दिन मनाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्दछ र श्रमजीवीहरूले उत्सव मनाउँछन् । मई दिवस श्रम दिवसको रूपमा पश्चिमबाटै [...]
अजय कुमार झा एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा नेपाल बसेको छ । १३ करोड वर्षअघि बनेका हिमालय पर्वत शृङ्खला, उपत्यका र तराइका क्षेत्रहरू प्राणीहरूको आकर्षण क्षेत्र [...]
सम्झनामा किसान आन्दोलनका कमाण्डर कृष्णराज वर्मा
[caption id="attachment_4358" align="alignright" width="150"] श्यामसुन्दर यादव[/caption] श्यामसुन्दर यादव नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र किसान सङ्घर्षबारे चर्चा गरिन्छ भने स्व. कृष्णराज वर्माको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । नयाँ पींढीका लागि उनको नाम नौलो [...]
घुम्टो प्रथा कहिलेसम्म ?
प्रियासिंह थारु राज्य पक्षले महिलाको लागि ३३ प्रतिशत संबैधानिक अधिकार हरेक निकायमा सुनिश्चितता गरेता पनि महिला पछि नै परेको देखिन्छ । कहिले हुन्छ महिला आफैं जागरुक? के आफ्नो हक अधिकार [...]
मधेशी जनजाती तथा उत्पीडितलाई पुनः गुलाम बनाउने रणनीतिमा बाबुराम
मधेश आन्दोलनको रापताप पछि भएको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा दुई तिहाई भन्दा बढी मधेशी, जनजाती तथा उत्तपीडित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा संविधान निर्माण गर्न बाट लगाउन डा. बाबुराम भट्टराई ज्यूले [...]
मधेश प्रदेशः मधेश आन्दोलनको उपलब्धि
वि.सं. १८१९ भाद्र ९ गते वडा महाराजा पृथ्वी नारायण शाहले मकवानपुर जिते देखि नै तराई/मधेशमाथि शाहवंशको शासन शुरु भयो र त्यससँगै मधेशी समुदायमाथि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक तरहको विभेद [...]
राजनीतिमा ‘स्पेस’कोलागि मधेशमा आतंक फैलाउने डाक्टरको योजना !
ई. कौशल गोपालवंशी मधेश विदेशीको प्रयोगशाला बन्दै गएको देखिन्छ । मधेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर रिसर्चरहरुले रिसर्चको काम गर्दै गरेको देखिन्छ । हुन त मधेशमा रहेको धेरै तथ्य [...]
यो बर्ष मात्र नभई खेतीको सिजनमा प्रत्येक बर्ष किसानलाई कहिले बीउ, त कहिले मल खाद्यको अभाव । बीउ र मल खाद्यकै अभावका कारण भौतारिनु पर्छ किसानलाई । कहिले मलको लागि [...]
पीडित अवसर नपाउने भए मधेशी कोटा खारेजी गरौं !
कौशल गोपालवंशी म सधै मधेस आरक्षण कोटाको लागि लेख मार्फत आन्दोलन गर्ने, आज भन्दै छु मधेसी कोटा खारेजी गरौ। मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु मध्ये आरक्षण पनि एक हो । [...]
छठ पर्वको महिमा र विधिविधान
समाजमा भाइचारा, प्रेम र सहिष्णुता अभिवृद्धिको द्योतक महान छठ पर्वको रौनक छाएको छ । एक दशकअघिसम्म तराईमा मात्र हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ देशका विभिन्न भागमा मनाउन थालिएको छ । श्रद्धा [...]